Kule veki, umthengi esidibana naye ebebuza ukuba kutheni umxholo abasebenza nzima kuwo ungabonakali wenza umohluko. Lo mthengi akakhange asebenze ukuphuhlisa oku kulandelayo kwimithombo yeendaba zentlalo, endaweni yokusebenzisa uninzi lweenzame zabo kwintengiso ephumayo.
Sibanike umfanekiso wobungakanani babaphulaphuli babo kwimidiya yoluntu ngokuthelekiswa nabo bakhuphisana nabo- kwaye ke sibonelela ngefuthe ebenalo kwindlela ekwabelwana ngayo ngomxholo womntu okhuphisana naye. Amanani makhulu… oko kukhulisa abaphulaphuli abaninzi kwimidiya yoluntu kugxotha phantse wonke umntu kwisithuba. Ukuze ukhuphisane nomxholo, umxhasi wethu kufuneka akhuphisane kwimidiya yoluntu, naye!
Ukuze uphumelele ekuthengiseni ishishini lakho kwimidiya yoluntu, kufuneka utyale ixesha kunye nezixhobo. Lo mthi wesigqibo uyakunceda ubone ukuba ukulungele ukumilisela iinzame ezimalunga neendaba ezentlalo eziza kukhokelela ekuqwalaselweni ngakumbi nasekukhokelweni kweshishini.
Ngethamsanqa kuwe, amaqonga eendaba ezentlalo unezixhobo ezintle kunye namathuba okujolisa ekwenzeni kanye loo nto. Kwiqonga elinje ngeFacebook, usenokufumana ukubambeka okungcono ngomxholo okhuthaziweyo ngaphandle kwephepha lenkampani yakho.